मालपोतका पियनको नै कमाई १० करोड, अरुको कति होला ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
मालपोतका पियनको नै कमाई १० करोड, अरुको कति होला ?
काठमाडौं । एउटा स*रकारी पियनले कति कमाउला ? सरकारी पदहरुमध्ये सबैभन्दा तल्लो र फाइल उठाउन तथा फाइल सदर बदर गर्नु नपर्ने पद हुनाले पियनले जेनतेन खान पुग्ने कमाई गर्ला भन्ने सबैको अनुमान हुन सक्छ । तर कुनै सरकारी कार्यालयका पियन यस्ता पनि भेटिदा रहेछन्, जसले कसैले कल्पनै गर्न नसक्ने सम्पत्ति जोडेका छन् ।
३० बर्षभन्दा बढी मा*लपोतमा कार्यरत पियन राजेन्द्र बस्नेतले आर्जन गरेको सम्पत्ति सुन्दा चकित नै परिन्छ । यो अबधिमा उनले ९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको स*म्पत्ति जोडेछन् । यतिले पनि उनी सन्तुष्ट रहेनछन् । अझै सम्पत्ति थप गर्न उनी नक्कली रसिद काटेर राजश्व रकम आफ्नो खा*तातिर दाखिला गर्न थालेछन् । ‘पा*प धुरी*बाट कराउँछ’ भने झै भयो । उनको यो अपराध सार्बजनिक भयो । उनी पक्राउ परे ।
पक्राउ परेपछि अख्ति*यारका अनुसन्धान अधिकृतहरुले उनको बारेमा बिस्तुत अध्ययन गरे । अध्ययन गर्दा त अनुसन्धानका अधिकारीहरु चकित ! उनको सम्पत्ति करिब १० करोड बराबरको देखियो ।
११ लाख रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ परेको विषयमा अनुसन्धान गर्दा उनीसँग करोडौंको अवैध सम्पत्ति फेला परेको हो । उनी २०४५ सालमा मालपोत विभाग काठ*माडौंबाट कार्यालय सहयोगी (पियन) पदबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन ।
यो अबधिमा उन्ले आफ्नो तलब पारिश्रमिक, बचत आय, घरजग्गा बिक्री, सवारी साधन बिक्री, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा र आमा टुकुकुमारी बस्नेतको पेन्सन बचत समेत गरी कुल ७४ लाख ७३ हजार ३ सय ७३ रु*पैयाँ वैध आर्जन गरेछन् । बाँकी ८ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ती गैरकानुनी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अख्तियार दुरु*पयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेत, उनकी श्रीमती सीता बस्नेत, आमा टुकु*कुमारी बस्नेत, भतिजा कृपा बस्नेत समेतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको अदु*अआका प्रवक्ता प्रदी*पकुमार कोइरा*लाले जानकारी दिए ।
Previous बिष्णुमायाकाे सम्पूर्ण पढाइ खर्च व्यवसायी तथा कलाकार फुर्वा दाेर्जेले ब्यहाेर्ने!
Next दिनको २ घण्टा नागरिकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिनुपर्छः सांसद चौधरी